Dab Ka Kacay California oo Sababay Dhimashada 31 Ruux | Somaliland Today
← Cabsida Laga Qabo in Donal Trump Oo Ka Baxo Heshiiska Iran
Maraykanka iyo Israa’iil Oo Ka Baxay Xubinimada Hay’adda UNESCO →
Dab Ka Kacay California oo Sababay Dhimashada 31 Ruux
Tirada dadka la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dabka ka kacay waqooyiga California ayaa gaadhay 31 ruux, iyada oo saraakiishu ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii dari karto. Boqolaal dad ah ayaa wali la la’yahay ka dib markii ay kaceen 22 dab oo xoog badan.
In kabadan 8,000 oo shaqaalaha dab damiska ah ayaa isku dayaya in ay xakameeyaan dabka. Dabkan kaymaha ka soo billawday ayaa burburiyay 3,500 oo dhisme iyo 68,800 hektar oo dhul ah, waxaana ku barakacay 25,000 oo ruux.
Toddobo iyo toban ruux ayaa hadda la xaqiijiyay in ay ku dhinteen deeganka Sonoma, deegaanka Mendocino waxaa ku dhintay siddeed ruux, halka afar ruux ay kaga dhinteen deegaanka Yuba, iyadoo labo kalana la xaqiijiyay in ay ku dhinteen deegaanka Napa.
Dhimashadan cusub ee la soo sheegay ayaa dabkan kaymaha ka dhigaysa kii ugu xumaa ee California ka dhaca tan iyo 1933dii, markaas oo dab uu Los Angeles ku dilay 29 ruux.
Dabaylihii xoogga badnaa ee sii hurinayay dabka ayaa maalmahan dambe hoos u dhacay, laakiin waaxda saadaasha hawadu waxay ka digayaan in dabayshu ay dib u xoogaysan doonto habeennimada Jimcaha.